ပျောက်နေတယ်…သူ ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့် – Healthy Life Journal
မေး. သမီး ပုံမှန်အမြဲရာသီမှန်ပါတယ်။ တစ်လတစ်ခါ ၃ရက်ပါ။ အဖြူလည်း မဆင်းပါဘူးရှင့်။ ရာသီကတော့ နှစ်ရက်လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လလုံးပျောက်ပြီး မတ်လမှပြန်ပေါ်ပါတယ်။ အခုကျတော့ ဧပြီလရော မေလရောပျောက်နေပြန်ပါတယ်။ ထပ်ပဲစောင့်ရမလား၊ ဆေးခန်းပြရတော့မလား အကြံပေးပါဦးနော် ဆရာ။ အပျိုဖော်ဝင်ခါစကတော့ တစ်လလောက်ထိန်တာဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အခုက ၂လကျော်နေပြီဆိုတော့ စိတ်ပူလို့ပါဆရာ။
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. ရာသီတွေ မမှန်ဘူး၊ ပျောက်နေတယ်၊ သူဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်… ရွာစေချင်ရင် မရွာနိုင်ဘူး၊ မရွာစေချင်ရင်တော့ သွန်းဖြိုးမစဲတော့တယ်ဆိုတာ “ရာသီ”ပါပဲ။ ရာသီပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ တရားခံတွေကအများကြီး။ အပျိုလား အအိုလားမသိ။ ရည်းစားရှိလား မရှိလားမသိတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့များလားလို့ မေးဖို့က အားနာစရာ။ အရမ်းဝ အရမ်းပိန် ကိုယ်အလေးချိန် အပြောင်းအလဲတွေကလည်း ရာသီပျောက်စေတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဥပမာ- ရီးစားသူများနောက် ပါသွားတာတွေကလည်း ရာသီမမှန်တာဖြစ်တတ်ပြန်ရော။ ဓမ္မတာအကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆရာ့စာအုပ် “မိန်းမသားတို့ဘ၀မှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါ အဲဒါဓမ္မတာ” စာအုပ်လေး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
Related Items:Female, period
ရာသီလာစဉ် ဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း သက်သာစေရန်
အရွယ်မတိုင်ခင် သွေးဆုံးခြင်း မဖြစ်အောင်